ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » The First နေ့စွဲတွင်အစက်အပြောက်စေရန်ခြောက်လအလံနီ
အားဖြင့် Bridget Sirtonski
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 24 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အခါပထမဦးဆုံးချိန်းတွေ့ဖို့လာ, ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမားသောဖိအားများရှိစေနိုင်သည်. အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်, အဘယ်အရပ်သို့သွားရန်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကိုပင်. ဒါဟာအားလုံးနည်းနည်းလွှမ်းမိုးသောနိုင်ပါတယ်. သို့သော်, သင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်များအတွက် Lookout အပေါ်ဖြစ်သင့်အနည်းငယ်အလွန်အရေးကြီးသောအပြုအမူတွေရှိပါတယ်. ငါကြောက်လန့်အနီရောင်အလံသတိပေးချက်ကိုနိမိတ်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုပြောနေတာ.
ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်နားလည်နိုင်ဒါဟာင်, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုတိုင်းဝါကျနှင့်လှုပ်ရှားမှုသင့်နေ့စွဲ့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်ပါသည်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်များအတွက် Lookout ပေါ်မှာရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက် Breaker ရှိပါတယ်.
ကို Date စဉ်အတွင်းဖုန်းနဲ့စာပို့
အခုကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာလေးလံတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာနေထိုင်နားလည်ဖို့, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုပယ်ဖုန်းကိုသွင်းထား. ရက်စွဲစဉ်အတွင်းဖုန်းနဲ့စာပို့တာရုံထိုကဲ့သို့သောရိုင်းစိုင်းဟန်အမူအရာသည်. အဘယ်အရာကိုမျှသူတို့သည်သင်၏ရက်စွဲစဉ်အတွင်းစာပို့ထက်မှနားထောင်ရန်လွန်း uninteresting များမှာတူတစ်စုံတစ်ဦးခံစားရစေတယ်. သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသင်၏စာသားနာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနိုင်. ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုပထမဦးဆုံးနေ့စွဲထွက်ဦးသောအခါ, အသံတိတ်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသွင်းထားနဲ့ရက်စွဲ၏ကျန်ရှိသောအဘို့သင်တို့အိတ်သို့မဟုတ် မှစ. ခါးပန်း၌စွန့်ထား. သူတို့ကပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဘေးဖယ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုထားဘူးဆိုရင်, ထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိဆင်းကြတို့သည်မိမိတို့ဖုန်းကိုထားလိမ့်မည်.
flirty ဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်က explicated ခံရခြားနားရှိပါတယ်. အနည်းငယ်အပြစ်မဲ့ထင်မြင်ချက်များကောင်းပါတယ် (ထိုကဲ့သို့သောတိုတိုတုတ်တုတ်သင့်မတ်မတ်သို့မဟုတ်အသွင်အပြင် complementing အဖြစ်), ဒါပေမဲ့သူတို့ကပိုညစ်ညမ်းသောမှတ်ချက်တွေလုပ်ကိုစတင်မည်ဆိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ရက်စွဲ reevaluate သင့်ပါသည်. လူတိုင်းဖြည့်ခံရဖို့ကိုချစ်သောသူ, သို့သော်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ခြေထောက်စမ်းသပ်ရကြ၏သူတို့သည်သင့်အိမ်ယူလိုဘယ်လိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးသင်ပြောပြရှိခြင်းပဲမသက်မသာဖြစ်. သင်ကရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှာကြမယ်ဆိုရင်, သင်သိလာအောင်ကြိုးစားနေရုံအိပ်ရာ၌သင်ရတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မရသူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ချင်တယ်.
ရက်စွဲရုံနေပုံကိုလျှင်၎င်းသည်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဘယ်တော့မှမယ်နှင့်သူ / သူမပြီးသားသင်သည်ဝေဖန်ဖြစ်ပါတယ်. ဥပမာများ: သင်ရုံအားကစားရုံမှရောက်ရှိလာနှင့်ဤသင်တို့၏ရက်စွဲအကြောင်းကြားထိုအရပ်၌တုန့်ပြန်ရပါစေ "နဲ့တူတစ်ခုခုပါလျှင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျိုးကိုသူတစ်ဦး. Total ကုမ္ပဏီအားကစားရုံကြွက်?သင်သည်သင်၏ရက်စွဲတွေ့ဆုံရန်ရောက်လာသောအခါ "သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင့်ကိုဝတ်ထားဘာကိုဝေဖန်. စောစောပေါ်သင်သည်ဤဝေဘန်ရေးနေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်ပုံစံကိုကြာရှည်မည်ကိုဖွယ်ရှိင်နှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှု၏အမြဲတစေဝေဖန်ပြစ်တင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
A ကောင်းဆုံးစကားလက်ဆုံများသောအားဖြင့်အညီအမျှ shared ဖလှယ်မှုများ၏ပါဝင်ပါသည်. သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့နေ့စွဲရှက်တတ်လျှင်အဘယ်မှာရှိကြိမ်လည်းရှိပါတယ်, နှစ်ဦးသည်သင်တို့၏ပိုပြီးထွက်သွားတဲ့တစ်ဦးမှဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုပိုမိုဆောင်ရွက်မည်, ကောင်းသောအရာ. သို့သော်, ရက်စွဲမှာအဓိကအားဖြင့်တစ်ဖက်သတ်စကားပြောဆိုပါလျှင်, သင့်ရဲ့နေ့စွဲအဆက်မပြတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းပြောသွားဘယ်မှာ, တကနည်းနည်း tiresome ဖြစ်လာ. ပိုဆိုးသည်မှာ, သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်အကြောင်းကိုပိုမိုပြောဆိုရန်စကားပြောကြသောအခါသူတို့သည်သင့်တို့ကိုပယ်ဖြတ်သောအခါ. တစ်ဦးကတစ်ဦးချင်းစီရက်စွဲအခြားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့်သင် connect ဘယ်လိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင်ဘယ်လောက်အံ့သြစရာများနှင့်ပြည့်စုံသောအကြောင်းကို monologue မအခွင့်အလမ်း.
ကျွန်မဒီရက်အိမ်မှာနေထိုင်နေနှင့်အလုပ်လက်မဲ့စီးပွားရေးကိုခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူနေ့စွဲအပေါ်မလိုက်မသွားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, နားလည်နိုင်မယ့်. သူတို့နှစ်တည်ငြိမ်ပြီးဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘ၏အိမ်တွင်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့၏အစီအမံနှင့်အတူအနည်းငယ်လွန်းအဆင်ပြေမထင်ကြလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့ပေးသင့်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသက်ရှိအဘို့ပြုအတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိကြချေလျှင်သင်စစိုးရိမ်သင့်. အဘယ်အရာကိုသင့်အရက်စွဲပြောပြနိုင်ရင်ကြောင်းကိုသင်၏အလုပ်ခန့်ကသိပ်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါသည်? သင်သည်အဖြေကိုသိလိုမပြုစေခြင်းငှါ…
ဒီတစ်ခုသိသာထင်ရပေမဲ့ (ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲယခင်ဆက်ဆံရေးကိုဆွေးနွေးဖို့ကြီးကိုအချိန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သကဲ့သို့), ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ဖြစ်သူဆောင်ခဲ့လျှင်, သူတို့ကိုဝိုင်းစကားပြောဘယ်လောက်အာရုံစိုက်. သူတို့့ကိုအကျဉ်းချုံးသူတို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းလျှင်အဆင်ပြေင်, သူတို့သည်သင့်အားပြောလျှင်မူကားတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းသူတို့ဖြစ်ကြပြီးဘယ်လောက်သူတို့ကသူတို့ကိုမုန်းသောအရာကို, သင်အမှန်တကယ်တစ်စက္ကန့်နေ့စွဲစီစဉ်ထားမသင့်. သူတို့ရဲ့အတိတ်မိတ်ဖက်ခန့်ရန်လိုသို့မဟုတ်အပေါင်းအဘော်လုပ်ကြလော့ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုခုကိုသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်ဆံရေးမှအပေါ်ပြောင်းရွေ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲခါးသီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်, သောအမှု၌သင်သည်ထိုသူတို့ကိုမြင်လျှင်ဆက်လက်မအကောင်းဆုံးအတွက်င်.
ကြီးမြတ်တဲ့ Kiss ၏လျှို့ဝှက်ချက်